के-के भयो सेनाभित्र ? – कान्तिपुर | नेपाल इटाली डट कम
के-के भयो सेनाभित्र ? – कान्तिपुर
April 24, 2009 — nepalitaly
के-के भयो सेनाभित्र ? यो खुलासा गरेको हो आजको कान्तिपुर दैनिकले। के के भयो सेनाभित्र शीर्षकमा लेखिएको समाचारको पूर्ण अंश भने पत्रिकाबाट गायब छ। बाँकी अंश पृष्ठ १६ मा भनिए पनि पृष्ठ १६ मा त्यस समाचारको कुनै अंश राखिएको छैन। प्रथम पृष्ठमा भने माओवादीले प्रधानसेनापति बनाउन चाहेका रथी कुलबहादुर खड्का र प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत् कटवालको फोटो राखिएको छ। फोटो साभारः कान्तिपुर
काठमाडौं, हरेक साता बस्ने नेपाली सेनाको प|mाइडे मिटिङ मा बिहीबार जे भयो, त्यस्तो पहिले सायदै भएको थियो । शुक्रबार बिदा परेकाले अघिल्लै दिन बोलाइएको बैठकमा केही जर्नेलले आफ्नै एक वरिष्ठ सहकर्मीमाथि तीव्र प्रहार
गरे । उनी थिए, रथी कुलबहादुर खड्का, जसलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले रुक्मांगद कटवालको ठाउँमा प्रधानसेनापति बनाउन चाहेको छ ।
बैठकको सुरुमै युद्धकार्य महानिर्देशक -डीजीएमओ) गौरवशमशेर राणाले सेनामा सुनामी ल्याउन खोजिएको उल्लेख गर्दै भने, सेनालाई सिध्याउन खोज्ने भाइरस यही कोठाभित्र छ । अनि नम्बर १ बाहिनीका प्रमुख हिमालय थापाले थपे, समस्याको मूलजरो हामीभित्रै छ, त्यसलाई खोज्नुपर्छ र समाप्त पार्नुपर्छ । दुवैको संकेत रथी खडकातर्फ थियो ।
सेनाको सर्वोच्च निकाय पीएसओज -पि्रन्सिपल स्टाफ अफिसर्स) का सदस्य र उपत्यका क्षेत्रका कमाण्डर गरी झन्डै २५ जर्नेलहरू उपस्थित बैठकमा खडकामाथि सेनालाई नियन्त्रणमा लिने माओवादी मिसनको मतियार बनेको घुमाउरो आरोपसमेत लाग्यो । तैपनि उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्, डेढ घन्टा लामो बैठकभरि आँखा चिम्लेर कुर्सीमा हल्लिरहे ।
माओवादीले प्रधानसेनापति बनाउन चाहेका खड्का (बायाँ) र कटवाल। फोटो साभारः कान्तिपुर
बैठकको समापन गर्दै सेनापति कटवालले कटाक्ष गरे, हाम्रो घरमा कसैले राजनीति छिराउन खोज्दैछ । तर एउटा प्रमोसनका लागि नेताका घरघर चाहार्ने अवस्था कदापि आउन दिनुहुन्न । मैले आज जे गर्दैछु, त्यो मेरो लागि होइन, संस्था र राष्ट्रका लागि हो ।
नेपाली सेनामा अहिले सरकारप्रति नरम कुनै धार छ भने त्यसको अगुवाई यिनै रथी कुलबहादुर खडकाले गरेका छन् । त्यसैले हामी केबीलाई घरभित्रको माओवादी भन्छौं, एक उच्च सैन्य अधिकृतले बताए ।
सेनामा विप्लव निम्त्याउन लागेको आरोपमा तीन साताअघि खडका लगायत उनी पक्षधर २० जर्नेललाई सैनिक प्रहरीमार्फत थुन्ने आदेश जारी गरिएको दाबीसमेत अर्का अधिकृतले गरे । तर सबैलाई एकैचोटि कारबाही गर्दा सेना टुक्रिनसक्ने देखेर अन्त्यमा त्यो कदम रोकियो, उनले बताए ।
सरकारले म्याद नथप्दा अवकाश पाएका आठ सहायकरथीलाई सेनापतिविरुद्ध उक्साएको आरोप खडकामाथि लगाइएको थियो । उनीहरूलाई चिफ -कटवाल) ले म्याद थप्न सकेन भन्ने लागिरहेको बेला केबीले आफू चिफ भएमा थमौति गरिदिने आश्वासन दिएका थिए, सैनिक स्रोतले दाबी गर्‍यो, त्यसपछि दिलीपशमशेर राणालगायत केही भूपू जर्नेलमार्फत कटवाललाई राजीनामा दिन दबाबसमेत दिइएको थियो ।
स्रोतअनुसार खडकाले माओवादीलाई आफू सेनापति भएमा गर्ने कामको सूची नै दिएका छन् ः सेनापतिको सेवाअवधि ३५ र अन्यको ३० वर्ष तोक्ने, असारभित्र माओवादी छापामारलाई सेनामा लिने, जनसेना प्रमुख पासाङलाई मेजर जनरल र अन्य माओवादी कमाण्डरलाई बि्रगेडियर र त्यसमुनिका पद दिने, ५० प्रतिशत सैनिकलाई विकास निर्माणका काममा खटाउने आदि ।
सरकारको योजना मंगलबार कटवालबाट स्पष्टीकरण आएपछि उनलाई त्यसैदिन पदमुक्त गरेर खडकालाई सेनापति बनाउने भन्ने थियो । त्यस क्रममा कटवालले मानेनन् भने उनी र अरू केही जर्नेललाई समात्नुपर्ने हुनसक्छ भनेका थिए खडकाले,माओवादी स्रोतले बतायो, तर त्यो प्रक्रियालाई सकेसम्म सहज ढंगले गर्ने योजना थियो ।
स्रोतअनुसार खडकाको योजनाअनुसार उपरथी शिवराम प्रधान -हाल पोखरा) लाई सम्भाररथी, उपरथी डम्बर गुरुङ -दिपायल) लाई प्रबन्धरथी, उपरथी राम गुरुङ -पूर्वी पृतना) लाई युद्धकार्य महानिर्देशक, सहायकरथी दीपक गुरुङलाई सैनिक सहायक आदि बनाउने ठानिएको थियो । तर सेनापति कटवालको प्रतियोजनाले खडकाको योजनालाई अगाडि बढ्न दिएन ।
भारतीय राजदूत राकेश सुदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अभूतपूर्व कूटनीतिक दबाब दिएपछि खडकालाई सेनापति बनाउने योजना मंगलबार रोकिएको थियो । तर बुधबार बिहान ८ः३० मा बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले कटवाललाई हटाउने निश्चित प्रायः थियो । सुद बिहान ६ः३० मै राष्ट्रपति निवास पुगे । अघिल्लो राति १०ः३० मा सूचित गरिएअनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल पनि ७ः३० मा त्यहाँ पुगे । त्यसपछि माओवादी पछाडि हट्नाले मात्र मुलुक ठूलो दुर्घटनाबाट जोगियो ।
त्यतिबेला सेना सफ्ट कू गर्ने टुंगोमा पुगिसकेको थियो । त्यसका निम्ति निर्धारित एच आवर थियो ः बुधबार बिहानको राति । एच आवर अत्यन्त गोप्य राखिने हुनाले ठ्याक्कै समयचाहिँ धेरै कमलाई मात्र थाहा छ, स्रोतले भन्यो ।
योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल, विपक्षी नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, मन्त्रीहरू, अन्य नेता र केही छानिएका व्यक्तिलाई फोन, भेटघाटलगायत सबैखाले सम्पर्कबाट वञ्चित गरी लाइन एरेस्ट गरिन्थ्यो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि नागार्जुनमै थुनेर राखिन्थ्यो, योजना निर्माण संलग्न स्रोतका अनुसार, सिंहदरबार, बालुवाटार, वाईसीएल अफिस, मन्त्री निवास आदि सिज गरिन्थ्यो ।
माओवादी लडाकुको हतियार राखिएका सबै कन्टेनरलाई घेरेर राख्ने तर क्यान्टोनमेन्टमा बसेका लडाकुलाई चाहिँ केही नगर्ने, बरु बाहिर निस्केर गाउँ र्फकन वा अन्यत्र जान प्रेरित गर्ने भन्ने योजना थियो । शिविरमा रहेका अनमिनका अनुगमनकर्तालाई चाहिँ हेलिकप्टरमा राखेर सीधै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रस्थित अनमिन मुख्यालयमा ल्याएर राख्थ्यांै, उच्च सैन्य स्रोतका भनाइमा, उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्नेमा विशेष ध्यान दिइएको थियो ।
तयारीअन्तर्गत काठमाडौंस्थित १० नम्बर बाहिनी -स्पेसल फोर्स) र भ्याली कमाण्डलाई तम्तयार राखिएको थियो भने उपत्यका बाहिरका डिभिजन कमाण्डरहरूलाई मंगलबारै बिदाबाट बोलाइएको थियो । हाम्रो योजना सैनिक कू नझल्कने किसिमबाट जाने भन्ने थियो, स्रोतका अनुसार, केही जर्नेलले नमान्न सक्थे । तर चिफको आदेशविरुद्ध जोजो तगारो बन्छन्, उनीहरूलाई कारबाही गर्दै गइन्थ्यो । स्रोतको दाबीमा रक्तपातचाहिँ सकेसम्म कम गर्ने भन्ने थियो ।
स्रोतका अनुसार सैन्य कारबाहीको पहिलो खाकाबारे आइतबार दिउँसो सैनिक मुख्यालयमा छलफल भएको थियो । त्यहाँ कटवालनिकट अधिकृतहरूले उनलाई जतिसक्दो चाँडो एक्सनमा गइहाल्न दबाब दिएका थिए । जति ढिलो भयो, हामीलाई माओवादीले खान्छन् भन्ने थियो, सहभागी एक सैनिक अधिकृतले भने, अहिलेजस्तो राम्रो माहौल र यति चुलिएको राजनीतिक अवस्था कहिल्यै आउँदैन भन्ने धारणा थियो । त्यसैले हामीले भन्यौं, चिफसाब, तपाईं अगाडि नसर्ने भए -स्लिपिङ) ट्याब्लेट खाएर सुत्नुस्, बाँकी काम हामी गर्छाै ।
उनका अनुसार सबैको कुरा सुनिसकेपछि कटवालले त्यसरी सोझै कू गरेर जाँदा ठूलो संकटमा परिने भएकाले संवैधानिक डोरीमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने योजना विस्तृत रूपमा सुनाए । त्यो डोरी राष्ट्रपतिलाई बनाउने उनको धारणा थियो,ती अधिकृतले खोले, नेपालमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न बंगलादेशलाई एउटा मोडल मानिएको थियो ।
बंगलादेशमा त्यहाँका सेनाप्रमुख मोइन अहमदले दुई वर्षअघि राष्ट्रपतिमार्फत नागरिक सरकार गठन गराई आमनिर्वाचनमार्फत केहीअघि मात्र राजनीतिक दललाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए । ती मोइन सेनापति कटवालका पुराना परिचित हुन् । दुई महिनाअघि -फागुन ४/७) उनलाई सुटुक्क काठमाडौं झिकाएर बंगलादेशी अनुभवबारे छलफल गरिएको थियो ।
तर राष्ट्रपति शासनको प्लान र हामी होइनौं, मिलिटरी साइडको योजनामा मात्र हामी संलग्न हौं, कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका सैन्य अधिकृतले भने, त्यसका निम्ति बाहिरैबाट योजना आएको थियो । उनको संकेत भारततर्फ थियो । त्यसबीच सेनापति कटवालले आफ्ना मित्र एवं भारतीय सेनाका प्रमुख दीपक कपुरमार्फत दिल्लीमा निणर्ायक लबिइङ गरिसकेका थिए । भारतीय संस्थापनले नेपाली सेनामा हात हाल्ने माओवादी प्रयासलाई गम्भीरतापूर्वक लियो ।
कटवाललाई पदमुक्त गर्न खोजेमा राष्ट्रपतिज्यू देशवासीको नाममा सम्बोधन गरेर कठोर कदमसमेत चाल्ने मनस्थितिमा मंगलबारसम्ममा पुगिसक्नुभएको थियो, राष्ट्रपतिनिकट स्रोतले स्वीकार्‍यो । आफू अपि्रय कदम चाल्न बाध्य हुने औपचारिक जानकारी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई समेत दिएका थिए । राष्ट्रपति शासनका योजनाकारले प्रत्यक्ष शासन, सर्वदलीय सरकार वा अराजनीतिक व्यक्तिहरू सम्मिलित नागरिक सरकारको विकल्प अगाडि सारेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा संविधानसभा विघटन गरेर नयाँ संविधान निर्माणको छुट्टै प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सोचाइ थियो,स्रोतको दाबीमा, यो विकल्प अहिले पनि पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको छैन ।
One Response to “के-के भयो सेनाभित्र ? – कान्तिपुर”
November 26, 2010 at 17:15
yo daish assto aae ho ka
« सेनाको महत्व बढी, सरकार सेना विवाद अनुपयुक्त -एमाले
आगो निभाउने क्रममा रामेछापमा १५ सैनिकको मृत्यु »